WTTC inoratidza zvinoshamisa kuitika kwe COVID-19 paPasirese Kufamba & Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WTTC inoratidza zvinoshamisa kuitika kwe COVID-19 paPasirese Kufamba & Tourism
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuva nehurongwa hwakajeka uye hwakarongeka hwehutano & hutsanana kwaizotsigira chikamu pakuvakazve chivimbo chemufambi uye kubvumidza mafambiro epasi rose kutangazve uye kupora nekukurumidza.
World Travel & Tourism Council yaburitsa itsva Economic Trends Report.
COVID-19 denda rakaona Asia-Pacific dunhu kutambura kwakanyanya GDP kurasikirwa.
America ndiyo yakarova zvishoma, yakaponeswa neyakagwinya mudzimba kupora.
Asia Pacific ndiyo yaive nharaunda yakanyanya kurohwa nedenda re COVID-19 zvichienderana negwaro idzva regore reEconomic Trends Report kubva ku World Kufamba & Yekushanya Kanzuru (WTTC).
Chirevo ichi chinoratidzira kuzara kwakazara kwekurambidzwa kwekufamba kwakagadzirirwa kudzora COVID-19 pahupfumi hwenyika, matunhu ega ega, uye kurasikirwa kwaro nemabasa pasirese.
Asia-Pacific ndiyo yaive nharaunda yakaipisisa, nechikamu cheiyo chikamu kuGDP ichidonhedza 53.7% inokuvadza, zvichienzaniswa nekudonha kwepasi rose kwe49.1%.
Mari yevaenzi vepasi rese yakanyanya kurohwa muAsia Pacific, ichidonha ne74.4%, sezvo nyika zhinji mudunhu iri dzakavhara miganhu yavo kune vashanyi vanopinda. Mari yedzimba yakapupurira kudzikira asi zvakaenzana kuranga kuderera kwe48.1%.
Yekufamba & Yekushanya basa mudunhu rakadonha ne18.4%, zvichienzana nekutyisa 34.1 miriyoni emabasa.
Nekudaro, kunyangwe paine kuderera uku, Asia-Pacific yakaramba iri dunhu rakakura kwazvo rebasa rebazi mu2020, ichiverengera 55% (151 mamirioni) yemabasa epasirese Ekufamba & Ekushanya.
Virginia Messina, Mutevedzeri Wemutungamiri WTTC, akati: “Dhata reWTTC rakaburitsa pachena kukanganisa kwakakonzerwa nedenda iri kuTravel & Tourism pasi rese, zvichisiya hupfumi hwakatambura, mamirioni asina mabasa uye vazhinji vachitya ramangwana ravo.
“Rondedzero yedu yegore negore yeEconomic Trends Report inoratidza kuti dunhu rega rega rakatambura zvakadii nemitemo inokanganisa kufamba yakaunzwa kudzora kupararira kwe COVID-19.